बुधबार, २४ असार २०७७, ०१ : ०५
टाउकोको ट्युमर निकाल्दै गर्दा भ्वाइलिन बजाउने बिरामी
एउटा अर्केस्ट्रामा सामूहिक रुपमा भ्वाइलिन वादन गर्ने एक महिलाको टाउकोको सर्जरी गर्नुपर्ने र त्यो ज्यादै कठिन भएकाले भ्वाइलिन वादिकालाई सर्जरी गरिरहेका बेला भ्वाइलिन वादनका लागि स्वीकृति दिइएको छ।
अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित ह्यामबर्गमा पछिल्लो साता यति कडा हिउँ र हुरी आयो कि त्यहाँका घरहरु घर नरहेर हिउँघर बन्न पुगे। हेर्दा विश्वासै नलाग्ने आकृतिहरु बन्न थालेपछि त्यहाँका स्थायी बासिन्दालाई एक हिसाबले रमाइलो त भयो तर यतिबेला भने उनीहरु आतंकित छन्।
प्रेमिका पाउन विज्ञापन
भ्यालेन्टाइन्स डे त सकियो तर प्रेमिका फेला पार्ने तौरतरिका र उटपट्याङ क्रियाकलाप भने सकिएको छैन। अब मार्क रोफेलाई नै हेर्नुस् न ! उनले करिब ५० हजार खर्चेर ठूलो होर्डिङ बोर्ड भाडामा लिए र आफूलाई प्रेमिका चाहिएको विज्ञापन गर्न भ्याए।
अढाई करोडको रक्सी चोरी
२ लाख १७ हजार डलर बराबरको रक्सीहरु चोरिएको उजुरीपछि प्रहरीले चोरहरु पक्राउका लागि खोजी शुरु गरेको छ।
अमेरिकी औँठी पुग्यो फिनल्यान्ड !
औँठीमा उनी पढ्ने स्कुलको नाम खोपेको हुनाले औँठी फिर्ता पाउन सम्भव भएको हो। उनलाई जसले स्कुलताका प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए, जीवनभर उनीसितै बाँकी जीवन बिताए। ४० वर्षे वैवाहिक जीवन बिताएपछि सान म्याकेनाको निधन भएको थियो।
आफ्नै बेइज्जती !
हुन त सबैले आफ्ना बारेमा राम्रै लेखोस् भन्ने चाहना हुन्छ। आलोचना छाप्ने हिम्मत त विरलै सरकारको होला। तर हालै एउटा गज्जबको विरलै घट्ने घटना ब्राजिलमा घट्यो।
चुनाव जित्न सार्वजनिक बेइज्जती
चुनाव जित्न मान्छेले केसम्म गर्दैनन् ? अहिले अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनाव नजिकिदै जाँदा पदका आकांक्षीमध्ये एक माइकल ब्लुमबर्गले वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बेइज्जती गर्ने राम्रै अवसर जुराएका छन्।
ट्वाइलेट पेपर चोर्ने पक्राउ
हतियारधारी एउटा समूहले हङकङमा ट्वाइलेट पेपर डकैती गरेका छन्। उनीहरुले डकैती गरेको पेपर सयौँको संख्यामा रहेको एएफपीले जनाएको छ।
सबैभन्दा महँगो रक्सी बिक्रीमा
रक्सीका पारखीहरुका आँखा यतिबेला संसारकै दुर्लभ रक्सीको संकलनमाथि छाएको छ। अमेरिकाको एक प्रख्यात व्यवसायीले आफूसँग संकलन भएका दुर्लभ रक्सीलाई इन्टरनेटमा डाक बढाबढमा राखेका छन्।
सैनिकको तोपिलो प्रस्ताव
रुसका एक सैनिकले आफ्नी प्रेमिकालाई भ्यालेन्टाइन्स डेका दिन चकित पारिदिए। उनले आफ्ना साथीभाइहरुलाई ट्याङ्क नै बाहिर ल्याउन लगाए र ट्याङ्क वरिपरि राखेर मुटुको आकार दिए।
पोर्न स्टारको राजनीति
इटालीकी प्रख्यात पोर्न स्टार इलोना स्टेलरले आफ्नै एउटा नयाँ राजनीतिक दल बनाएकी छन्। पछिल्लो समय पेन्सन कटौती भएपछि आफूलाई बाँच्न गाह्रो भएको भन्दै उनले राजनीति गर्ने घोषणा गरेकी हुन्।
बेलायती इतिहासमा म्याग्नाकार्टा निकै महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। राजतन्त्रात्मक बेलायतलाई छोटो अवधिका लागि गणतन्त्रमा ल्याउने यो दस्तावेज धेरैका लागि चासोको विषय पनि हो।
पिज्जा दिनुअघि थुक्ने पक्राउ
१८ वर्षदेखि निरन्तर सहरका कुना कन्दरा र बिल्डिङका कोठाचोटामा पिज्जा पु-याइरहेका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।